गल्ती मैले मात्रै गरेको हो भन्ने लाग्छ भने, मलाई फासी देऊ,
होइन, ठिकै गरेको रहेछु भन्ने लागे, भेट्दा कतै हासी देऊ !
नहुनेहो मिलन भने, तिमी सँग भएको मेरो बीउ पनि मासी देउ !!
मात्र टुट्यो, छैन छिनेको त्यो मन भने, बिन्ती एक चोटिलाई गासीदेऊ
फाटेको हो मनमा धाजा भने, निस्ठुरी बन, मेरो दिल अझ भासी देउ !!!
गल्ती मैले मात्रै ......!!!
हाम्रो प्यारो नेपाल,सुन्दर शान्त बिशाल त अब पूस्तकमा पनि पढ्न पाइन्न की? अब जस्लाइ शनक चल्यो त्यही गर्ने चलन छ, साच्चै भन्नु पर्दा भोली के हुन्छ नेपालमा पशुपतीनाथलाइ पनि थाहा छैन,मैले किटेर नै भने। नेपाली समाचार साइट चाहारेर समाचार सुन्दा एकादेशमा भएको घटना जस्तो लाग्छ। दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले घटनाक्रमले फट्को मार्छन। एउटा हुल भेला हुन्छन,तिनीहरुको माग तिनीहरुलाइ नै थाहा हुन्न। अनी तिनीहरुको लिडर कसैलाइ पत्तो हुन्न। कोही बिदेशीको हात भन्छन कोही प्रतीगमनको हात भन्छन,हुन त को हो तर हात चाही बलियो नै रहेछ। त्यो बलियो हातले बदमासहरुलाइ २,४ थप्पड लगाएर केही सबक सिकाय कस्तो हुन्थ्यो होला?
हुल र जमात कै कुरा गर्दा हाल सालै समाचार छापामा छाएको कुरा गर्न मन लाग्यो। नेपालमा म्रित्युदण्ड चाहियो रे। शुरुमा मृत्युदण्डको कुरा साझामा देखें। लाग्यो कुन चाही बियरले मातेर साझामा हौवा फिजाउदै छ। त्यस पछि केही ब्लगहरुमा देखे। लाग्यो हावा त लागेकै रहैछ र पो पात हल्दिंदै छ। तर सोचें कुन नया नेपालका ठेकदार रहेछन मृत्युदण्डको वकालत गर्ने। साच्चै भन्नु पर्दा आजकाल आफुलाइ नया नेपालको गोठालो जस्तो लाग्छ। नया नेपाल मेरो लागी कालो अक्षर भैसी बराबर छ। कांग्रेस एमालेले २०४७ मा संबिधान बनाए। अहिले संबिधान सभाको चुनाव गराएर तिनै पून नया संबिधान बनाउन कस्सिएका छन। धरोधर्म यो किस्ताबन्दी रुपमा संबिधान किन बनाइन्छ मैले बुझेको भए मार्दिउं। तर यो किस्ता बन्दी संबिधान कुनै बेलाका बम्पर योजना जस्तै भएको छ। बम्पर उपाहारको टिकेट बेचेर चिठ्ठा नै नखोली फरार भए जस्तै नेताहरु संबिधान नै नबनाइ हराउलान जस्तो छ। अब यो म्रत्युदण्डको वकालत गर्ने हुलले चाही के गर्ने हो कुन्नी ?
गएको आइतबार एक जना मित्रको बिहेमा जन्ती जाने मौका मिल्यो। बेहुला बेहुली जगिएमा ब्यस्त भए पछि एउटा कुनामा सानो जमात बनाएर हामीलाइ गफमा ब्यस्त तुलायौं। गफ के १० मिनेट अगाडी बढेको थियो, मेरै छेउका मित्र कुर्लिए नेपालमा मृत्युदण्ड चाहिन्छ। भगवानको क्रिपा पनि ठुलै रहेछ। नेपालमा म्रित्युदण्डको मागलाइ हौवा मान्ने म मेरै अगाडी मृत्युदण्ड माग गर्ने नया नेपालका एक मिस्त्रीको दर्शन मिल्यो। तिनी मिस्त्रीलाइ शिर देखी पाउसम्म हेरें। खेरौ छला भएका लिखुरे अनि पेट पूक्क बहिर निक्लेको नेपाली नभए पनि नेपाली नै देखिने ५ फुट ५ इन्चका मर्द खडा थिए। लाग्छ मृत्युदण्ड माग्ने जुलुशबाट टपक्क टिपेर कसैले जन्त पठाए जस्तो।
मेरै सामिप्यमा भएका मित्रको बेकुफ दर्शन सुन्दा मैले सिधै भने,नो नो नो नो नो। तपाइ मान्छे भएर अमान्छे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कसैको जिबन लिने तपाइसंग केही अधिकार छैन। उनीले मेरो बोली काटे,ख्याती जस्तो एउटा निर्दोष बिध्धार्थीलाइ क्रुरतापूर्बक मार्नेलाइ मृत्युदण्ड चाहिन्छ। प्रजातन्त्रको नं एक देश अमेरिका मै हेरौं न। उनले सिधै आफ्नो बिचारको बलियो दलिन तेर्साय। मेरो छेउको अर्का मित्रे भने ओबामाले २३ वटा गलत मृत्युदण्ड सच्चाएको तपाइला थाहा छ? ति नया नेपालका मिस्त्री चुप लागे। मैले तिनीलाइ सिधै भने उपेन्द्र महतोको बाउ राम आशिस महतोले १५ बर्षकी नानीलाइ हातपात गर्दा प्रहरी प्रशासनले बचाएर लुकाउंदा केही नबोल्ने अनि ख्याती श्रेष्ठलाइ मार्दा मृत्युदण्ड चाहिने? भएको कानुन लागु गर्नुछैन तपाइ कसरी नया कानुन पालनाको ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ? कहीं एउटा मान्छेको लागी नया कानुन बनाउने पनि काइदा हो? तपाइको घरमा खाना छैन चामलको बन्दोबस्त गर्नुहोस मासुखाने सपना त्यागीदिनुहोस,मैले यसरी नै भने।
यिनी नया नेपालका पक्का मिस्त्री रहेछन,उनीले मृत्युदण्डको बलियो आब्श्यक्ता त भनेनन तर अब नेपालमा मृत्युदण्ड चाहिन्छ चाहिन्छ भनेर दो्र्हाए। नया नेपालको एक गोठालो म अबाक भएं। के गर्न,उनको पनि एकै भोट हो मेरो पनि एकै भोट हो। उनीले नया बिचार दिए मैले दिइन। नया नेपालमा सुनुवाइ उनकै बढ्ता हुन्छ किनकी उनकै बोलीमा नयापन छ।
आमजनताले के भन्छन कुन्नी। तर आमजनताको चाहानाको त मतलब कांहा छ र? पार्टीका टाउकेले जे चाह्यो त्यो नै आमजनताको चाहना हुन्छ। हेरौं यो मृत्युदण्डको माग कता पुग्छ?यदी नेपालमा मृत्युदण्डको शुरुवात गरे त्यो केबल आफ्नो बिरोधीको सफाया गर्ने माध्यम बन्नेछ।
घाम डुब्न लाग्यो हेरन ,सायद